» Betclic Registration
BetClic inonyoreswa muPortugal! Murau kudzora Tourism muPortugal mutambo, nhasi vatanga ravo rokutanga uchitamba mutambo rezinesi mumutsara intraperitoneal (SRIJEM) pamusoro 25 Chivabvu 2016 BetClic!
Icho rezinesi wokutanga, vamwe zvirokwazvo rinotevedzera kamwe kubudiswa panguva muitiro rinoitwa nemurairo.
The Srij kuramba gwara yakazaruka kupindura mibvunzo yose uye inogadziridza mukuru mvumo nemutemo kupa ruzivo Overview Portugal Located sangano.
Zvinokurudzirwa kuti vanoridza akachengeteka uye mutoro.
Betclic.pt Tutorial nokuti nhoroondo itsva yakazaruka uye vaya vane e-mail yapfuura BetClic.
kupinda mashoko kana yokutama vanopfuura mumwe BetClic nhoroondo. zvinoreva anogamuchirwa dhipoziti uye Portuguese quotas. Munoziva zvose pano.
Nzira uchitsanya kuwana nhoroondo yako kunyoresa inowanika pashure mharidzo yevagari kunyoresa kadhi NIF.
Portugal akapa DC NIF uye Betclic.pt kunogonawo nemasaini nekuda Passport (Somuenzaniso) atume kushanda vanyorwa danho. Uye kana achiri vakaneta nhoroondo, unofanira kumirira Chinyorwa ongororo magwaro nokuda chikwata asati kuridza BetClic.
Personal Data kunge yakarurama, sezvo vasati 1 Kuongororwa vachibvunza nokuzivikanwa utariri uye gwaro ongororo. Chete mushure kudzora nhoroondo Data zvakanaka yakasimbiswa 100% uye fundraiser simba.
Unogona sarudza nyika Portugal uye Euro (€), nekuti nzvimbo iyi kuchikuva kupinda inodiwa vose vanogara Portugal, IP Access Portuguese.
Chikumbiro fomu iri nyore chaizvo, uye kana uine dambudziko, unogona tichikumbira rubatsiro dzokukurukurirana kuwanikwa papeji. chitsamba: Unogona kuva dambudziko zvinovhura katsi iri Internet Explorer, Zvinokurudzirwa kuti kopi Coles uye kero iyi Google Chrome kana Firefox Mozillla: https://www.academiadasapostas.com/redirect/betclic (Link iyi zvinoita kuti iwe rakazaruka nhoroondo Betclic pedyo Academy ).
anotamisa chete ATMs, nemabhengi makadhi iripo ndokuchiisa munhoroondo
Paysafecard, Neteller, Moneybookers uye zvimwe zvigadzirwa chikwama haasi kuwanika nokuti Portuguese mutemo
BetClick sedimentation zvazvingava 2% It rinoshandisirwa mumwe yakaderera Dam 100 €
The pasipasi dhipoziti iri 10 €
kusaina-up bhonasi riri 50% ari dhipoziti rokutanga 50 €
muenzaniso: Aine dhipoziti pamusoro 100 € € Users vanogamuchira kupfuura 50 nokusunga.
Possible zvakafanana kuti maererano, pasinei kusavapo kwemitero nemitero inobhadharwa Hurumende Portugal.
Mune dzimwe mitambo, haugoni bheji musi Portugal nekuda nezvemirau
muenzaniso: Ice Hockey, nhabvu, Baseball, nezvimwewo.
Pachange pasina mari inonyoreswa kubheja imba nokuti mitemo hatibvumiri.
Zvinokurudzirwa kuti vaya inonyoreswa achinyora zvakare kwapera BetClic nokuda kusiyana mashoko anofanira kugadziriswa.
Hezvinoi yakajeka kuti ndiro mutambi wacho rokugovera zvoupfumi zvinobatsira kuti bvunzo.
Paris kuchikuva rinowanikwa paIndaneti, asi vachiri ema kumusika zvagadzirirwa
50% ari dhipoziti rokutanga 50 €. Kugamuchira bhonasi ichi, unofanira kupinda nzira dziri rokutanga dhipoziti. ndapota, verenga mashoko Billing uye kuongorora zvemashoko bhonasi.
Nokuti vaya akazarura BetClic kugamuchira Portuguese vatengi anogona hureruke revavhoti inotevera nhoroondo:
Danho rokutanga Login pamwe Username wako uye pasiwedhi;
Nokuti mucharova kuzadza muminda kunyoresa vachiri kushaikwa (humboo anozivikanwa uye akaonekwa azere yenyu nhoroondo yekare BetClic). danho iri kunoda ruzivo rwakakwana (Somuenzaniso, nhoroondo), gaba chiyamuro, ari kuongorora nhamba / MBEU CD uye Databases.
pakupedzisira, iwe uchava redirected kuti dhipoziti peji yacho, apo unogona kuwana imwe mubhadharo kuti muchiPutukezi kuumba nyaya itsva (kadhi uye ATM), asi havana kuwana bhonasi dhipoziti yokutanga 50%
Pashure nokuvhura nhoroondo, unofanira kuenda uye kutumira tarisa kopi magwaro maviri:
A mugari kadhi kana pasipoti kana pakutyaira rezinesi hunotsigira kuti ani mumugwagwa;
voruzhinji mabasa kana rwezvemabhengi nhoroondo atakatora kuzosimbisa kero.
With kubatana, tinya bhatani “zvinomuomera kuikanganwa” kuti mushandisi zita, iwe uchava redirected kusvika dhanilodhi peji yacho gwaro. Tinoratidza kuti iwe kukopa pakarepo pashure kuvhura account kuti gare gare, kana uchida kuita ongororo yokutanga kupatsanurwa nokukurumidza. The kuongorora magwaro aya anogona kugara mazuva anoverengeka uye dziva inofanira kuva pfupi sezvinobvira.